Wati wambopa DeviantART kopā sezvinowanikwa mukutsvaga chiteshi?
Ndakatsvaga DeviantART kune zvinyorwa zvangu zvisingawanzoitiki asi zvinobudirira mapurisa evablogi pano pa WHSR uye vazhinji vevaverengi vakandiudza kuti vakanga vasati vambofunga nezveDeantantART kukurudzira mabhuku avo emabhulogi.
Iko kunzwira tsitsi, nekuti DeviantART (Ini ndichaidaidza DA kwenguva pfupi dzimwe nguva mune ino post) yakanyanya kudarika peji renzvimbo yevaimbi. DA inzvimbo yekushamwaridzana kubva mumusoro kusvika kune zvigunwe, uye kunyange ichinyanyogadzirirwa vekunyora uye vekunyepedzera vanyori, inopa yakawanda mikana yemagariro kune vanoblogi zvakare, kusanganisira:
2 Nhanho 1 – Unoda Rudzi Ruripo
3 Nhanho 2 – Funga
4 Danho 3 – Shandisa platforma Kukurudzira
4.2 2. Mazano (privātās ziņas)
4.3 3. Kutsauka (Art & Kunyorera iesniegumi)
5 Danho 4 – Tora Kubatsira kweSvondo
6.2 2. Mhinduro kumashoko ose ounowana
6.3 3. Iva Nomutsa uye Wechokwadi. Dzivisa Mazhenje Ekutengesa uye Balss reklāmas panelis Zvose Zvinodhura
7.1 1. Usarege Kuziva Iyo Etiquette
7.3 3. Iva Nehanya Ne "Basa Rakafuridzirwa"
7.4 4. Nyaya Dzakashata surogātpasts
8 Shandisa Zvakanaka DeviantART statistika
8.1 Shandisa Google Analytics
Kuva nehurukuro yako uye nharaunda paD DA inobatsira kana niša yako yekubhururuka ichiwira mune imwe yenzvimbo dzinotevera:
Māksla & Amatniecība
Mifananidzo & mafirimu
Inogona kushanda nedzimwe nzvimbo pamwe chete, kana iwe uri kugadzira zvakakwana kuti uuye nekunakidza kwezvinhu zvose zviri zviviri (niša yako uye zvisikwa zviripo) pamwechete.
Iyi chinyorwa ndechekuti ndakashandisa sei DeviantART mu2013 kuunza vateveri ve20 + kuverengera yangu yezvinyorwa uye kuti nditevere kushandiswa kwangu paIndaneti uye kuburikidza nehuwandu hwemashoko ega ega. Bhuku rangu renhema nderokutaura nyaya dzakapfupi nemifananidzo dzine roboti, vanhu uye vatorwa sevatongi. Iyo emuārs pachayo ndiyo webhusaiti yekugamuchira nyaya dzangu nemifananidzo. Peji yepamberi ndiyo pandinobhura nezvemashoko, mazano, zvinyorwa, kubvunzurudza, mazano uye kukurukurirana nehana yangu shomanana.
Nhanho 1 – Unoda Rudzi Ruripo
Zvakatora makore kukudziridza hukama uye kushandura vausingazive vateveri. Rega ndimbowedzere kuti hapana chandakakwanisa kuita – kushambadzira-huchenjeri – kugadzira nharaunda iyi, parutivi kubva pakugadzira nguva yekumbotenderedza deviantART kusangana nevamwe maartist nevanyori, kutaura nezvebasa ravo, kupindura Kune zvataurwa pane zvandakatumira uye kuita hurukuro mumagazini. zvinyorwa (DeviantArt galvenie un personīgie emuāri; man ir arī mans).
Apo ndakasarudza kukurudzira kuvapo kwebhuku rangu renhema mumusoro kune izvo zvandaive ndakagovana pamusoro paDeantantART, ndakashandisa zvinyorwa zvebhuku uye zvitsanangudzo mune zvinyorwa (Kusiyanisa) kuwedzera zvikwereti uyekum.
Mamwe muenzaniso ndiyo nheyo yenyaya yangu yenyaya yandakaisa pa blog yangu kwemakore, asi kuti ndakasarudza kudhindazve DA kuti ndiwane mhinduro yakawanda, ALLIFE projekts. Nhasi iyo kuchinja kunobata 1,002 maonero, 12 zvido uye 64 mazwi.
Nhanho 2 – Funga
Nhanho inotevera yakanga iri kuedza kuvaita kuti vaite zvinyorwa zvinyorwa zvavanofarira pane blog blog yangu. Kushandisa zvinyorwa zvinyorwa, ndakakoka mharaunda yangu kuti ione bhuti rangu yehuwandu hwehuwandu pane zvandakaisa kuna DeviantART.
Iyoyo naiho nhaho yakakosha: ndakaudza vateveri vangu kuti ndaida rubatsiro rwavo zvakanyanya zvakashata, nekuti ndakanga ndisina chokwadi nezvekuti dzimwe sarudzo dzangu pamusoro pebhurogu yangu dzaizoonana sei kufarira kweva.
Kuti zvive zvakajeka, kupinda muDA DA hakusi nyaya yekuchengeta nemhinduro yaunogamuchira, asiwo inosanganisira kutarisa nevanosvitsa nguva nenguva; somuenzaniso, nokuverenga uye kupindura pamusoro pekupedzisira kwekupinda kwavo kwepanhau kana maitiro avo matsva kana zvinyorwa zvakanyorwa. Ini ndichawana zvakanyanya pamusoro peizvi gare gare munyaya ino, asi zvakakodzera kuti titaure pano, zvakare.
Mhedziso yenharaunda yeDeviantART yakasimba kwazvo; mhuri-yakafanana nenzira. Ndichatsanangurira zvakare gare gare mumashure kuti maitiro api anokwidza nemiganhu nemitambo yekunyorera yakaodzwa mwoyo pachikuva ichi (uye kwete DA chete; Kingged.com inoshanda nenzira imwe chete, kushandisa sangano iriku nyaya.
Danho 3 – Shandisa platforma Kukurudzira
Chii chandakaita kuti ndiunze vazhinji mafaira ku blog yangu? Ndakashandisa chikamu chakasimba pane zveDA yangu profils: mans Deviant Journal.
Ndakanyora muganisi mutsva pandakaenda kune tsanangudzo pamusoro pezvingaitwa nevateveri vangu paBlog my fiction uye kana vaizova vane mutsa sekuti vandiudze kuti vaifungei nezvazvo, uye kana vachida kufambidzana nepamusana pekutumira tsamba nyora kune "vanyori".
Vanhu vazhinji munharaunda yangu yeDA vanoverenga uye vakataura pamusoro penyaya yangu yekunyora zvinyorwa kupfuura maDhivhosi yangu, saka ndiyo yaive nzvimbo yakanakisa kubata munhu wese. Žurnāli ari zvakare apo vashandisi veDVD vanowana zvakanyanya zvemunhu nekutaura kwavo, saka mhinduro yandakawana ipapo yaive nenjere kupfuura zvandakawana pane imwe nzvimbo papuratifomu.
Ndakashandisawo DeviantART Journal kukurudzira mans Twitter konts emuāram; zvisinei, ini ndakabudirira zvishoma nazvo (hapana chekutaura pakupinda uye chete 3 yakawanda vateveri veTwitter). Haasi mafeni mazhinji munharaunda yangu yeDA anoratidzika kunge anoshingairira vashandisi veTwitter, zvirinani avo vari mune rangu network. Nekudaro, ini ndinokukoka iwe kuti uedze iyi mhando yemuchinjiro-kukwidziridzwa, zvakare; ingangoshanda kwauri iwe pandisina ini.
2. Mazano (privātās ziņas)
3. Kutsauka (Art & Kunyorera iesniegumi)
Imwe nzira yekusimudzira zvaunofunga ndeye Kupesana. Ingosiya chikamu chezvinhu zvako (fragments, attēla izgriezums vai īss video klips) iyo inosangana nehururo yakazara pa blog yako.
Ndakaita izvi ne nyaya yangu pfupi Yakaputika. Unogona kuona mufananidzo uri pasi apa:
Sezvaunogona kuona, ndakatumira chete ndima mbiri dzokutanga dzenyaya yangu pfupi uye ndakawedzera "Inoenderera mberi …"Taurirana kune imwe yose pa blog yangu. Iwe unogona kuita zvakafanana neongororo dzako dzenyaya uye nguva refu.
Kuti uwedzere mamwe mashoko – kusanganisira tsika yechiremera chehupenyu hwangu – ndakashandisa nzvimbo yekutsanangura mu fomu yangu yekukumbira:
Kana iwe ukasika zvishandiso semubatsiri kana kuwedzera pamaklogi ebhuku, tarisa iyi nhaurirano pane DeviantART Forums.
Danho 4 – Tora Kubatsira kweSvondo
Mushure memwedzi yakati kuti vateveri vangu vaziva nezve bhurogu iyi, ini ndaida mhinduro chaiyo nezvayo nezviriodantti, saka ndakashandisa iyo magazini zvakare kugovera ongororo. Ini zvakare ndakashandisa DeviantART Zvidimbu kutumira chinongedzo kuongororo kune vanhu vandaiziva kuti vaisazoverenga bhuku rangu.
pano inosangana nechokupinda neongororo iwe kuti uone. Cherechedza kuti ndakagamuchira 17 mazwi anofadza pamusoro pekupinda ikoko ndoga uye kwete pa blog chete.
Pakutanga mu2015, ndakanyora imwe žurnāli yekupinda kuti ndikumbire mamwe mhinduro pane yangu zvemukati uye blog, sezvo DA Polls haina kundibata zvakanaka. Heano maitiro ekuonekwa
Sezvakaita paKinggedhi, haugone kungo enda spam. Unofanira kuumba hukama hwechokwadi, zvichibva pamwoyo, kubva pakuda kuita zvemukati mako uye mufaro kugoverana nevamwe. Mune mamwe mazwi, iwe unofanirwa kuve "nyanzvi pamoyo", kunyangwe kana usiri muimbi mune rako basa kana usinga bhurogu nezve art.
Nokusika nekukudziridza ukama, unogadzira wakavimbika anotevera. Heano mamwe mazano anobatsira anokutungamirira.
Tsigira vateveri vako uye vateveri sezvavari kukutsigira. Pese pamunomira nemagarari avo nemagazini uye iwe uchisiya mhinduro pabasa ravo, unosimbisa hukama nevanhu ava, kuumba zvisungo zvinopfuura nekureruka-uye-kugamuchira pakati pevanhu vaviri. Iko kutanga kwa ushamwari, chimwe chinhu chaunofanira kugara uchichikoshesa se blogger, nokuti hapana blogger inogona kuiita iga isina vanhu vanozvitarisira zvechokwadi.
2. Mhinduro kumashoko ose ounowana
Vashandisi veDeviantART vanofarira kushandisa nguva yakanaka vachitaura nezve vamwe basa uye zvinyorwa zvemapepa, nekuti ivo vanoziva iri nzira huru yekuvaka hukama hwakasimba.
Izvi ndizvo zvaunofanira kuita kana iwe watanga kutora mhinduro pamabasa ako: pindura kune izvo zvataurwa! Hapana hukama hunotanga (kana hunosimbiswa) kusvikira iwe uchibvuma uye ukapa mhinduro kune vatauriri vako.
3. Iva Nomutsa uye Wechokwadi. Dzivisa Mazhenje Ekutengesa uye Balss reklāmas panelis Zvose Zvinodhura
Musimboti wenharaunda dzeDA ndiko kushuva kwechokwadi kusangana nevanhu vatsva uye kuvaka hukama hwakakomberedza hunyanzvi nekunyora. Usaende kunotengesa, usaga spam: idzi inzira dzemoto dzekurasikirwa nevateveri (varindi) kana kuti kuendeswa kune vashandi veDA kuti vasarudze.
Kuve wekutengesa hazvishande kuDA zvakadaro. Kuedza kwako kukwidziridzwa kunofanirwa kunge kuri kwechokwadi, kunogarisana, iwe unofanirwa kuratidza kuti unotenda mune izvo zvaunoita (uye UNODA samada kublog rako nezviri mukati, handiti?). Izvi bīstamsi zvimwe zvisina musoro SEO zano rekuti vashandisi vewebhu vakashandisa munguva yakapfuura – izvi ndezve kuve pakati pevanhu.
Kuwedzera zvido zvehupenyu hwako pane blog e-pasts: ndiyo nzira yekuenda nayo, hongu, asi "kuita kuti zvive nyore" hakusi kungofanana chete – iwe unofanirwa kukurudzira vateveri vako kuti vafunge, uye kuti uite izvozvo, unofanirwa attēls nechokwadi chokuti vanonzwa ngozi kuita saizvozvo.
Tsanangura kuti zvinhu zvinoshanda sei pawebsite yako, kuti iwe haungapindi maitiro avo, kuti nzvimbo yako yakachengeteka kutarisa nekushandisa nguva. Uyewo, chengetai zvatinokurudzira nemamwe mazano aunoziva kuti vagara vaifarira. Somuenzaniso, kana vachikoshesa zvifananidzo zvekunyama uye une mufananidzo kana bhajiro rekufamba, vaudze pamusoro pezvifananidzo zvakanaka uye mafirimu emafambiro aunayo pane yako blog. Ipa chikonzero iwe uchifunga kuti vachafarira zvinhu izvi zveblogiti yako.
Ipfungwa yakanaka kuti ugare uchitanga nekuona rūts DA. Semuenzaniso, unogona kugadzira mākslas darbs kana pfupi infographic iyo inoratidza blog yako positi: wedzera zita kwairi uye woritora saiwo hunyanzvi kana mameseji ane preview / banner mufananidzo uye wozoisa zvinyorwa muDhivhoz chayek.
1. Usarege Kuziva Iyo Etiquette
Paneļa marudzi ehutano izvo zvisingabvumirwi paDeantantART platformas rūts tsika, zvakadai sevanhu vakuru vatsvuku uye mavara.
Kana iwe uchifanira kutarisa nyaya dzine chokuita nepabonde, zvechisarura kana zvechisimba, chero chii chaunonyora chinofanira kuramba ichiremekedza mirayiridzo, saka unoda kuti ucheke kana kuongorora basa rako. Wedzera chibatanisi kune webhusaiti yako kuitira zvakasara zvehupenyu hwako.
Vashandi veDeantantART (uye vashandisi vavo) vanowanzotarisa kukanganisa kwekodzero uye chikwata chine mutemo unorwisana nembavha yakabirwa (iepriekšēja etiķetes saite).
Unogona kubvunzwa magwaro anoratidza kuti uri mukati mekodzero dzako kushandisa mapikicha auri kushandisa. Kana iwe usingakwanise kupa chero humbowo, zvemukati zvichaderedzwa.
Kana iwe uskingkwanise kushandisa zviri pamutemo imwe yemhando yekutora mifananidzo, tarisa Creative Commons kana kuti Public Domain dzimwe nzira.
3. Iva Nehanya Ne "Basa Rakafuridzirwa"
Vamwe veDAR vanyori uye vanyori vane hanya kana zvasvika pakuita basa rinobva, saka kana iwe ukapinda mumhando ipi zvayo yehupenyu yakakufuridzira, iva nechokwadi chokuti uri78ti memakodzero ako ekugadzira basa rinobva.
Kufuridzirwa hakusi pasi pekubvumira kodzero, asi kunyoresa. Chengetedza mutambo wekuyambuka uchiona kuti urege kudzivisa nyaya dzepamutemo kana dzetsika.
4. Nyaya Dzakashata surogātpasts
Hazvisi zvinonzwika kuti vamwe vashandisi veDA vanoedza kushandisa simba rekusimudzira remazita (pane zvinyorwa zvemagazini, kutsauka uye profils yevashandisi) kusimudzira izvo zvavo, zvadzurwa uye makwikwi. Zviito izvi zvese zvichazopedzisira zvawana chirango cherumwe rudzi, kubva pamushandisi wekuvharidzira (nemushandisi akatsamwiswa) kuenda kumasipoti e surogātpasts ayo anogona kutungamidza kurambidzwa zvachose kubva papurakuganu uchu kukuvadwawa.
Ndazvitaura pakutanga mune ino post uye ini ndichataura zvakare: lieto mēstules, nekuti haisi kuzounza mabhenefiti, kunyanya kuDA.
Shandisa Zvakanaka DeviantART statistika
Izstrādājiet DeviantART mākslas darbus, izmantojot mākslas darbu galerijas, izmantojot mākslīgo mākslu (mākslīgo mākslu pirms tam, kad jūs esat pabeiguši, kā arī pazvanot).
Es uzskatu, ka kuganas zvishoma nezvokuti sei statistikas kopsavilkums ir inotarisa rūts yeGoogle mushandisi peji mune iri chithunzi pano kurudyii: iyo Statistics yekudonha-pasi menyu iripo pane yeiyo peji yevashandisi kune wese munhu kuti atarise uye atarise uye inoratiu Bhatani racho pacharo idiki tafura yehuwandu, isati yashanduka kuita "Statistika" mune mavara makuru, sezvakaratidzwa mufoto. Izvozvi, bhatani rangu rinoratidza:
18 238 komentāri
98 442 lappušu skatījumi
Nokutsvaga bhatani re "Vairāk statistikas" pasi peetafura pfupi pfupi, iwe uchaendeswa kune peji ye stats inounganidza mashoko ose zvakadzama. Ona pasi apa:
"Lapas skatījumi muhuwandu" inokuudza kuti mangani mapeji aunofanirwa kuita nawo
"Yakatarwa X nguva" inokuudza kuti kazhinji sei (gwaro roze) Kusiyana mukati mako mafirimu kwaionekwa
"X Deviants skatās" inoratidza kuti vangani vashandisi veDD (deviants) tevera (tarisa) iwe
"Yakagamuchira X zvinyorwa" ndiyo nhamba yemashoko (zvachose) iwe wakagamuchira paZvitsauko zvako
"Yakawedzerwa kunevanotsauka ‘nguva dzeX" ndiyo huwandu hwenguva dzaunofarirwa
"Akapa X zvirevo zvese 10 yakagashirwa" ndiye avhareji yemashoko awakatumira pane dzevamwe mabasa e10 yea yawakatambira pane yako (iyo yakakwira iyi nhamba, zvakanyanya kana iwe waunoshanda uchitaura nezvawataura)
"Kudengenyeka nemashoko akawanda nde …" zvinoratidza sarnasdeuka kwako kwakagamuchira mashoko akawanda mukati mako. Ichi chiratidzo chinoratidza izvo vateereri vako vari paDeviantART vanofarira uye vanotarisa parasti mako
"Inonyanya kufarirwa, ine X izlases" inokuudza kuti Kudengenyeka kwako kwaiva kwakanakisisa uye kuti ndezvipi zvakasarudzwa zvakagamuchirwa
"Inonyanya kuonekwa yakatsauka ndeye …" inokuudza kuti ndeipi pakati peZvipupuriro zvako zvakagamuchira peji peji maonero, uye vangani
Mavhareji ekuverengera kuwandisa, kusanganisira mazuva akawanda apfuura pakati pekutumira (muchidimbu) uye zuva ripi revhiki, nhamba
"Ruzhinji rwezvakatsauka runotumirwa kune (kategorija)" rinokuudza kuti ndeupi (Zvinyorwa, Mifananidzo, Zvimwewo) wakashandisa zvakanyanya pawakatumira basa kuna DeviantART
Kunyange semusununguko wakasununguka, zvisinei, unogona kusarudza pakati pekutsvaga kwe 3 yekutaura kwako: Zvose-nguva, Gore rapera uye Pēdējo 6 mēnešu laikā. Izvi zvinobatsira kuti uenzanise basa rako roze nemabasa ekupedzisira.
Shandisa Google Analytics
DeviantART inobvumira vashandi vanobhadhara (Core mitezo) kuwedzera kadhi yeGoogle Analytics kumaprofayiri avo kuti vawane zvakanakisisa zvezvinhu zvose zviri zviviri: platforma traffic analytics neGoogle analytics.
Virziet kursora rūti zita renyu rekombiyuta pakakwirira uye mhando inodonha ichazarura. Dzvanya "Zvirongva". Iwe uchawana runyora rweMasangano neZvamwe zvirongwa kurutivi rworuboshwe rwepeji. Dzvanya Munhu -> Zvose uye wozorora kusvika kune Zvimwe zvinhu Zvirongwa bhokisi; pamberi payo, uchawana bhokisi reGoogle Analytics neunda kuti unamate yako GA izsekošanas ID.
Kana iwe usingazivi maitiro ekuita izvi, tinya "Ndekupi kwandinowana yangu izsekošanas ID?"Sunga pedyo nemunda wokupinda.
Shandisa DeviantART kana bhulogi yako iri pamusoro pezviratidzwa, mhizha, fikisi, kuberekwa uye zvimwe zvinhu zvaunogona kuita iwe pachako.
와티 ambo 보파 DeviantART mukana sezvinowanikwa mukutsvaga chiteshi? Ndakatsvaga DeviantART kune zvinyorwa zvangu zvisingawanzoitiki
Ndakatsvaga DeviantART împreună zvinyorwa zvangu zvisingawanzoitiki asi zvinobudirira mapurisa evablogi pano pa WHSR uye vazhinji vevaverengi vakandiudza kuti vakanga vasati vambofunga nezveDeantantART kukurudzira mabhuku evita emab.
4 Danho 3 – Platforma Shandisa Kukurudzira
4.2 2. Mazano (Mesaje private)
4.3 3. Kutsauka (art & Kunyorera Trimiteri)
6.3 3. Iva Nomutsa uye Wechokwadi. Dzivisa Mazhenje Ekutengesa uye Un sistem promoțional vocal Zvose Zvinodhura
7.1 1. Etichetă Usarege Kuziva Iyo
7.4 4. Spuma Nyaya Dzakashata
8 Shandisa Zvakanaka DeviantART Statistici
Kuva nehurukuro yako uye nharaunda paD DA inobatsira kana nișă yako yekubhururuka ichiwira mune imwe yenzvimbo dzinotevera:
Arte & Meşteşuguri
Inogona kushanda nedzimwe nzvimbo pamwe chete, kana iwe uri kugadzira zvakakwana kuti uuye nekunakidza kwezvinhu zvose zviri zviviri (nișă yako uye zvisikwa zviripo) pamwechete.
Iyi chinyorwa ndechekuti ndakashandisa sei DeviantART mu2013 kuunza vateveri ve20 + kuverengera yangu yezvinyorwa uye kuti nditevere kushandiswa kwangu paIndaneti uye kuburikidza nehuwandu hwemashoko ega ega. Bhuku rangu renhema nderokutaura nyaya dzakapfupi nemifananidzo roboți dzine, vanhu uye vatorwa sevatongi. Iyo blog pachayo ndiyo webhusaiti yekugamuchira nyaya dzangu nemifananidzo. Peji yepamberi ndiyo pandinobhura nezvemashoko, mazano, zvinyorwa, kubvunzurudza, mazano uye kukurukurirana nehana yangu shomanana.
Kuve ane hushamwari uye akavhurika ane pfungwa ndizvo zvinoshanda paDeviantART zvakanakisa, nekuti maartist nevanyori arehandise ipuratifomu kungoda nhamba uye tsoropodzo, asi kuvaka hukama kupfuura zvese.
Zvakatora makore kukudziridza hukama uye kushandura vausingazive vateveri. Rega ndimbowedzere kuti hapana chandakakwanisa kuita – kushambadzira-huchenjeri – kugadzira nharaunda iyi, parutivi kubva pakugadzira nguva yekumbotenderedza DeviantArt kusangana nevamwe maartist nevanyori, kuraadouaurauata. zvinyorwa (blogurile principale și personale ale lui DeviantArt; le am și pe ale mele).
Apo ndakasarudza kukurudzira kuvapo kwebhuku rangu renhema mumusoro kune izvo zvandaive ndakagovana pamusoro paDeantantART, ndakashandisa zvinyorwa zvebhuku uye zvitsanangudzo mune zvinyorwa (Kusiyanvikere).
Mumwe muenzaniso ndiyo nheyo yenyaya yangu yenyaya yandakaisa pa blog yangu kwemakore, asi kuti ndakasarudza kudhindazve DA kuti ndiwane mhinduro yakawanda, Proiectul ALLIFE. Nhasi iyo kuchinja kunobata 1.002 maonero, 12 zvido uye 64 mazwi.
Nhanho inotevera yakanga iri kuedza kuvaita kuti vaite zvinyorwa zvinyorwa zvavanofarira panel blog yangu. Kushandisa zvinyorwa zvinyorwa, ndakakoka mharaunda yangu kuti ione bhuti rangu yehuwandu hwehuwandu panou zvandakaisa kuna DeviantART.
Iyoyo yaive nhanho yakakosha: ndakaudza vateveri vangu kuti ndaida rubatsiro rwavo zvakanyanya zvakashata, nekuti ndakanga ndisina chokwadi nezvekuti dzimwe sarudzo dzangu pamusoro pebhurogu yangu dzaizoonana kuaranama.
Kuti zvive zvakajeka, kupinda muDA DA hakusi nyaya yekuchengeta nemhinduro yaunogamuchira, asiwo inosanganisira kutarisa nevanosvitsa nguva nenguva; somuenzaniso, nokuverenga uye kupindura pamusoro pekupedzisira kwekupinda kwavo kwepanhau kana maitiro evita matsva kana zvinyorwa zvakanyorwa. Ini ndichawana zvakanyanya pamusoro peizvi gare gare munyaya ino, asi zvakakodzera kuti titaure pano, zvakare.
Mhedziso yenharaunda yeDeviantART yakasimba kwazvo; mhuri-yakafanana nenzira. Ndichatsanangurira zvakare gare gare mumashure kuti maitiro api anokwidza nemiganhu nemitambo yekunyorera yakaodzwa mwoyo pachikuva ichi (uye kwete DA chete; Kingged.com inoshanda nenzira imwe chete, kushandisa sangano iri nyamuyek.
Danho 3 – Platforma Shandisa Kukurudzira
Chii chandakaita kuti ndiunze vazhinji mafaira ku blog yangu? Ndakashandisa chikamu chakasimba pane zveDA yangu profil: Jurnalul meu deviat.
Ndakanyora muganisi mutsva pandakaenda împreună tsanangudzo pamusoro pezvingaitwa nevateveri vangu paBlog my fiction uye kana vaizova vane mutsa sekuti vandiudze kuti vaifungei nezvazvo, uye kana vachida kufambidzana nepamusana pekutyora tsamba "vanyori".
Vanhu vazhinji munharaunda yangu yeDA vanoverenga uye vakataura pamusoro penyaya yangu yekunyora zvinyorwa kupfuura maDhivhosi yangu, saka ndiyo yaive nzvimbo yakanakisa kubata munhu wese. Magazini ari zvakare apo vashandisi veDVD vanowana zvakanyanya zvemunhu nekutaura kwavo, saka mhinduro yandakawana ipapo yaive nenjere kupfuura zvandakawana panou imwe nzvimbo papuratifomu.
Ndakashandisawo DeviantART Journal kukurudzira contul meu de Twitter pentru blog; zvisinei, ini ndakabudirira zvishoma nazvo (hapana chekutaura pakupinda uye chete 3 yakawanda vateveri veTwitter). Haasi mafeni mazhinji munharaunda yangu yeDA anoratidzika kunge anoshingairira vashandisi veTwitter, zvirinani evita diverse rețele de rangu mune. Nekudaro, ini ndinokukoka iwe kuti uedze iyi mhando yemuchinjiro-kukwidziridzwa, zvakare; ingangoshanda kwauri iwe pandisina ini.
2. Mazano (Mesaje private)
Kune evita vandaiziva kuti vaisazoverenga bhuku rangu nechikonzero chero chipi, ndakatumira Mucherechedzo (meseji yakasarudzika paDA) nenhau uye ndakakumbira mhinduro.
3. Kutsauka (art & Kunyorera Trimiteri)
Imwe nzira yekusimudzira zvaunofunga ndeye Kupesana. Ingosiya chikamu chezvinhu zvako (un extras, o secțiune de imagine sau un videoclip scurt) iyo inosangana nehururo yakazara pa blog yako.
Kana iwe uchida kuti vateveri vako vataure chete pabhulogi yako uye kwete paDeantARTART, vhura zvinyorwa pamusoro pekutsauka kwako uye kumbirai vashanyi vako kuti vataure pane bhokisi rako rekutumira. Zvisinei, ndinokurudzira kuti iwe usiye mitsara miviri yakazaruka kana iwe uchida chaizvo mhinduro, nokuti haisi muteveri weD DA wese achada kusiya chikwata kuti ataure panel imwe nzvimbo.
Kana iwe ukasika zvishandiso semubatsiri kana kuwedzera pamaklogi ebhuku, tarisa iyi nhaurirano pane DeviantART Forum.
Mushure memwedzi yakati kuti vateveri vangu vaziva nezve bhurogu iyi, ini ndaida mhinduro chaiyo nezvayo nezviri mukati, saka ndakashandisa iyo magazini zvakare kugovera ongororo. Ini zvakare ndakashandisa DeviantART Zvidimbu kutumira chinongedzo kuongororo kune vanhu vandaiziva kuti vaisazoverenga bhuku rangu.
Pakutanga mu2015, ndakanyora imwe magazini yekupinda kuti ndikumbire mamwe mhinduro pane yangu zvemukati uye blog, sezvo DA Polls haina kundibata zvakanaka. Heano maitiro ekuonekwa
Sezvakaita paKinggedhi, haugone kungo enda spam. Unofanira kuumba hukama hwechokwadi, zvichibva pamwoyo, kubva pakuda kuita zvemukati mako uye mufaro kugoverana nevamwe. Mune mamwe mazwi, iwe unofanirwa kuve "nyanzvi pamoyo", kunyangwe kana usiri muimbi mune rako basa kana folosind arta bhurogu nezve.
Tsigira vateveri vako uye vateveri sezvavari kukutsigira. Pese pamunomira nemagarari evita nemagazini uye iwe uchisiya mhinduro pabasa ravo, unosimbisa hukama nevanhu ava, kuumba zvisungo zvinopfuura nekureruka-uye-kugamuchira pakati pevanhu vaviri. Iko kutanga kwa ushamwari, chimwe chinhu chaunofanira kugara uchichikoshesa se blogger, nokuti hapana blogger inogona kuiita iga isina vanhu vanozvitarisira zvechokwadi.
Izvi ndezvechokwadi împreună chero chikuva iwe chaunoshandisa, asi kunyanya DA. Zvakare, zvemukati zvevateveri vako zvinogona kukurudzira kuti iwe ugadzire zvakawanda uye zviri nani zvemukati.
3. Iva Nomutsa uye Wechokwadi. Dzivisa Mazhenje Ekutengesa uye Un sistem promoțional vocal Zvose Zvinodhura
Kuve wekutengesa hazvishande kuDA zvakadaro. Kuedza kwako kukwidziridzwa kunofanirwa kunge kuri kwechokwadi, kunogarisana, iwe unofanirwa kuratidza kuti unotenda mune izvo zvaunoita (uye UNODA kutenda kublog rako nezviri mukati, handiti?). Izvi hazvisi zvimwe zvisina musoro SEO zano rekuti vashandisi vewebhu vakashandisa munguva yakapfuura – izvi ndezve kuve pakati pevanhu.
Kuwedzera zvido zvehupenyu hwako panel blog ndiyo nzira yekuenda nayo, hongu, asi "kuita kuti zvive nyore" hakusi kungofanana chete – iwe unofanirwa kukurudzira vateveri vako kuti vafunge, uye kuti uite izvozvo, unofanirwa kuva nechokwadi chokuti vanonzwa ngozi kuita saizvozvo.
Tsanangura kuti zvinhu zvinoshanda sei pagină web yako, kuti iwe haungapindi maitiro avo, kuti nzvimbo yako yakachengeteka kutarisa nekushandisa nguva. Uyewo, chengetai zvatinokurudzira nemamwe mazano aunoziva kuti vagara vaifarira. Somuenzaniso, kana vachikoshesa zvifananidzo zvekunyama uye une mufananidzo kana bhajiro rekufamba, vaudze pamusoro pezvifananidzo zvakanaka uye mafirimu emafambiro aunayo pane yako blog. Ipa chikonzero iwe uchifunga kuti vachafarira zvinhu izvi zveblogiti yako.
Ipfungwa yakanaka kuti ugare uchitanga nekuona pane DA. Semuenzaniso, unogona kugadzira artwork kana pfupi infographic iyo inoratidza blog yako positi: wedzera zita kwairi uye woritora saiwo hunyanzvi kana mameseji ane preview / banner mufananidzo uye wozoisa zvinyorwa muDhivhosi yekutsanangudza kana muviko wech.
1. Etichetă Usarege Kuziva Iyo
Pane marudzi ehutano izvo zvisingabvumirwi paDeantantART panoul platformei tsika, zvakadai sevanhu vakuru vatsvuku uye mavara.
Kana iwe uchifanira kutarisa nyaya dzine chokuita nepabonde, zvechisarura kana zvechisimba, chero chii chaunonyora chinofanira kuramba ichiremekedza mirayiridzo, saka unoda kuti și verifica kana kuongorora basa rako. Wedzera chibatanisi kune webhusaiti yako kuitira zvakasara zvehupenyu hwako.
Vashandi veDeantantART (uye vashandisi vavo) vanowanzotarisa kukanganisa kwekodzero uye chikwata chine mutemo kèkwisana nembavha yakabirwa (legătură de etichetă bună în trecut).
Kana iwe usingakwanise kushandisa zviri pamutemo imwe yemhando yekutora mifananidzo, tarisa Creative Commons kana kuti Domeniu public dzimwe nzira.
Vamwe veDAR vanyori uye vanyori vane hanya kana zvasvika pakuita basa rinobva, saka kana iwe ukapinda mumhando ipi zvayo yehupenyu yakakufuridzira, iva nechokwadi chokuti uri mukati memakodzero ako ekugadzira basa rinobva.
4. Spuma Nyaya Dzakashata
Hazvisi zvinonzwika kuti vamwe vashandisi veDA vanoedza kushandisa simba rekusimudzira remazita (pane zvinyorwa zvemagazini, kutsauka uye profile yevashandisi) kusimudzira izvo zvavo, zvadzurwa uye makwikwi. Zviito izvi zvese zvichazopedzisira zvawana chirango cherumwe rudzi, kubva pamushandisi wekuvharidzira (nemushandisi akatsamwiswa) kuenda kumasipoti și spam ayo anogona kutungamidza kurambidzwa zvachose kubva papuratifomu kana kuanuri kuwan.
Ndazvitaura pakutanga mune ino post uye inițial ndichataura zvakare: folosind spam, nekuti haisi kuzounza mabhenefiti, kunyanya kuDA.
Shandisa Zvakanaka DeviantART Statistici
Instrumente de galerie DeviantART inopa mumwe muenzi, kunyangwe maakaundi emahara (kunyangwe mune imwe fashoni, sezvandiri kutsanangura pazasi).
Iwe unogona kuwana zvishoma nezvokuti sei statistici rezumate inotarisa pane yeGoogle mushandisi peji mune iri chithunzi pano kurudyi: iyo Statistici yekudonha-pasi menyu iripo pane yeiyo peji yevashandisi kune wese munhu kuti atarise uye atarise, uye inakaid. Bhatani racho pacharo idiki tafura yehuwandu, isati yashanduka kuita "Statistici" mune mavara makuru, sezvakaratidzwa mufoto. Izvozvi, bhatani rangu rinoratidza:
98.442 Vizualizări de pagină
Nokutsvaga bhatani re "Mai multe statistici" pasi peetafura pfupi pfupi, iwe uchaendeswa kune peji ye statistici inounganidza mashoko ose zvakadzama. Ona pasi apa:
"Vizualizări de pagini muhuwandu" inokuudza kuti mangani mapeji aunofanirwa kuita nawo
"Yakatarwa X nguva" inokuudza kuti kazhinji sei (gwaro rose) Kusiyana mukati mako mafirimu kwaionekwa
"X Deviants watch" inoratidza kuti vangani vashandisi veDD (devianți) tevera (tarisa) iwe
"Akapa X zvirevo zvese 10 yakagashirwa" ndiye avhareji yemashoko awakatumira pane dzevamwe mabasa e10 yese yawakatambira pane yako (iyo yakakwira iyi nhamba, zvakanyanya kana iwe waunoshanda uchitaura nezvawataura)
"Kudengenyeka nemashoko akawanda nde …" zvinoratidza kutendeuka kwako kwakagamuchira mashoko akawanda mukati mako. Ichi chiratidzo chinoratidza izvo vateereri vako vari paDeviantART vanofarira uye vanotarisa mukati mako
"Inonyanya kufarirwa, favoritele ine X" inokuudza kuti Kudengenyeka kwako kwaiva kwakanakisisa uye kuti ndezvipi zvakasarudzwa zvakagamuchirwa
Mavhareji ekuverengera kuwandisa, kusanganisira mazuva akawanda apfuura pakati pekutumira (multidimbu) uye zuva ripi revhiki, nhamba
"Ruzhinji rwezvakatsauka runotumirwa kune (categorie)" rinokuudza kuti ndeupi (Zvinyorwa, Mifananidzo, Zvimwewo) wakashandisa zvakanyanya pawakatumira basa kuna DeviantART
Vashandisi vakasununguka paDeantantART chete vanokwanisa kuwana pfupiso tab mune peji ye statistici, apo yakabhadharwa (Core) nhengo dzinogonawo kuwana mamwe ma tate, anopa mamwe mashoko akawanda uye zvinyorwa, kusanganisira matati.
Kunyange semusununguko wakasununguka, zvisinei, unogona kusarudza pakati pekutsvaga kwe 3 yekutaura kwako: Zvose-nguva, Gore rapera uye Ultimele 6 luni. Izvi zvinobatsira kuti uenzanise baza rako rose nemabasa ekupedzisira.
DeviantART inobvumira vashandi vanobhadhara (Core mitezo) kuwedzera kadhi yeGoogle Analytics kumaprofayiri evita kuti vawane zvakanakisisa zvezvinhu zvose zviri zviviri: analiză de trafic de platformă neGoogle analytics.
De-a lungul panoul cursorului zita renyu rekombiyuta pakakwirira uye mhando inodonha ichazarura. Dzvanya "Zvirongwa". Iwe uchawana runyora rweMasangano neZvamwe zvirongwa kurutivi rworuboshwe rwepeji. Dzvanya Munhu -> Zvose uye wozorora kusvika kune Zvimwe zvinhu Zvirongwa bhokisi; pamberi payo, uchawana bhokisi reGoogle Analytics nemunda kuti unamate yako GA Tracking ID.
Kana iwe usingazivi maitiro ekuita izvi, tinya "Ndekupi kwandinowana yangu ID de urmărire?"Sunga pedyo nemunda wokupinda.
Ita shuwa am unofarira kutora chikamu muhupenyu hweenzako, nekuti iko kutaurirana chaiko kunozoita kuti ubudirire paDA.